TOP 10: Tobanka Xiddig Ee Lacagtii Ugu Badnayd Soo Gashay Kubadda Cagta Iyo Farqiga U Dhexeeye Messi & Ronaldo - Gool24.Net
TOP 10: Tobanka Xiddig Ee Lacagtii Ugu Badnayd Soo Gashay Kubadda Cagta Iyo Farqiga U Dhexeeye Messi & Ronaldo
Lionel Messi ayaa noqday ciyaartoygii ugu mushaharka badnaa dunida sannadkii hore ee 2019, waxaanu ka sare maray Cristiano Ronaldo oo ay u dhaxaystay farqi lacageed oo dhan £11 milyan oo Gini.
Wargeyska France Foobtall ee kasoo baxa waddanka France, ayaa dibu-hubin ku sameeyey dakhliga ciyaartoyda ee sannadkii hore, waxaanu soo bandhigay tobanka xiddig ee uu dakhliga ugu badan usoo xerooday, kaas oo uga yimid dhawr ilood oo kala duwan.
Mushaharka ay ka qaataan kooxahooda iyo heshiisyada xayaysiismaha ee ay shirkadaha u sameeyaan, ayaa lacagta ugu badan ka heleen ciyaartoydu, waxaana kaalinta koowaad galay Lionel Messi oo ay qasnaddiisa ku dhacday £120 milyan oo Gini oo mushaharooyin iyo xayaysiisyo uu sameeyey uu ku helay.
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta labaad soo galay, waxaana sannadkii hore uu helay lacag dhan £109 milyan oo Gini.
Labadan ciyaartoy oo kaliya ayaa min boqol milyan oo Gini iyo ka badan ay soo gashay sannadkii 2019, halka xiddigaha kale ee dunidu ay ka hooseeyeen tirada saddexda god ah.
Laacibka reer Brazil ee Neymar ayaa kaalinta saddexaad soo galay, waxaana jeebaddiisa gashay £87 milyan oo Gini, halka Gareth Bale oo ciyaartoyga afraad ee lacagta ugu badan helay ahna ay xisaabtiisa ku korodhay £35.45 milyan Gini.
Antonine Girezmann iyo Eden Hazard ayaa shanaad iyo lixaad u dhacay, waxaanay kala heleen min £35.2 milyan oo Gini iyo £32 milyan oo Gini sida ay magacyadoodu u kala horreeyaan.
Halkan kaga bogo liiska tobanka ciyaartoy ee ugu dakhliga badnaa sannadkii 2019:
1. Lionel Messi – £120 milyan
2. Cristiano Ronaldo – £109 milyan
3. Neymar – £87 milyan
4. Gareth Bale – £35.45 milyan
5. Antoine Griezmann – £35.25 milyan
6. Eden Hazard – £32.06 milyan
7. Andres Iniesta – £31.14 milyan
8. Raheem Sterling – £30.96 milyan
9. Robert Lewandowski – £26.56 milyan
10. Kylian Mbappe – £24.73 milyan